Ukuhlala kweRose Wood (Iqela lokusingatha i-8+ yeendwendwe kuphela) - I-Airbnb
Ukuhlala kweRose Wood (Iqela lokusingatha i-8+ yeendwendwe kuphela)
Ifama sinombuki zindwendwe onguShalini
Nceda uqaphele ngaphambi kokuba ubhukishe esi sithuba.
Sijonge ukwamkela kuphela iqela eli-1 leendwendwe ezi-8-15 kule ndawo
Ngenxa yobhubhane ukwabelana ngendawo kunye namaqela amaninzi ngexesha elinye kuya kuba yinto engathandekiyo kwiindwendwe ezimbalwa ke sibamba iqela elinye kuphela ngexesha.
Ukubhukisha kubandakanya isidlo sakusasa, ikofu yangokuhlwa/iTea kunye neCampfire complimentary for 1 night.
Eyona nto inomtsalane ngaphakathi kwipropati
Enye yezona zinto zitsala umdla wethu kukujula okuPhezulu okubotshelelwe kumthi wemango wasendle weminyaka engama-400, unokufumana iBali swing eCoorg.
Ichibi lisasazwe ngaphezulu kweehektare ezi-1.10 kwintsimi yethu ye-paddy, indawo yayo efanelekileyo yokuthatha uhambo olude ukulijikeleza ngexesha lokuphuma kwelanga okanye ukutshona kwelanga. Ungakonwabela ukuloba apha.
Umtsalane wethu we-monsoon yilezi ngxangxasi zabucala ngaphakathi kwendawo yokutyala ikofu. Yeyona ndawo ifanelekileyo yepikiniki, chitha injikalanga yakho apha kunye nebhotile yewayini nasiphi na isiselo osikhethayo.
(Amaxesha onyaka: Juni-Septemba)
Kukho imizimba emincinci yamanzi (unyaka wonke) ngaphakathi kwepropati ukuba abantwana bangathanda ukudlala emanzini
5. Amasimi erayisi
Usenokuba ubonile amasimi erayisi ethe tyaba kuninzi lweIndiya kodwa kulo mmandla ufumana ukubona irayisi (ngoku ngamasimi erayisi angalinywanga) kufuneka ukrobe kwimithunzi eluhlaza ukunika amehlo akho unyango, undwendwe lwethu luyonwabele. ukudlala ibhola ekhatywayo, ibhola yevoli okanye iqakamba apha kwaye ebusuku yindawo efanelekileyo yokujonga iCamping kunye neenkwenkwezi.
6. Ukutyalwa kweKofu
Xa ukwi-coorg undwendwela intsimi yekofu kuyimfuneko kwaye unethamsanqa ukuba uhlala e-Rosewood uphakathi kwezityalo zekofu i-aura yekofu, ipepile, icardamom, i-arecanut, i-orenji kunye nesityalo se-vanilla songeza koku kukho i-Rosewood ekhuliswe endle. , Teakwood, Sandalwood, bamboo, Mango, Jackfruit, oki yesilivere kunye neminye imithi emininzi.
Ukuba umfoti wakho pls uphathe i-DSLR yakho Ukuba unethamsanqa ufumana indalo yasendle yaseWestern Ghats njengeMalabar Giant squirrel, Porcupine Indian, Indian Pangolin, Malabar Pit Viper, Malabar Large Spotted Civet, Stripe Necked Mongoose.
Unokuthatha umkhondo wokukhwela iintaka, ngelixa uhamba kumhlaba wokutyala ikofu kwaye ubone iintaka ezintle njengeMalabar grey hornbill, umlozi obetha umlozi, iiparrots, i-kingfisher, i-neelgiri pegion yamaplanga, irakethi enomsila we-drongo njl.njl zibambe kwikhamera yakho.
Yipropathi yaBucala kwaye iNdwendwe yethu inokuya kwindlela eya kwindawo yekofu, amasimi epaddy kwaye uhambe ecaleni kwechibi kwaye uyoloba.
Sikwalungiselela usuku olu-1 kunye nesiqingatha sosuku lweTrekking ngesicelo
Umbuki zindwendwe ngu- Shalini
Iyafumaneka xa undwendwe lundidinga